"RIVERBANK Hitachinaka" Indlu yeKhenketho ephangaleleyo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguYoshi
Nangona umamkeli ehlala endlwini, indawo yeendwendwe yahlulwe ngokupheleleyo kwindawo yehostele ukuze uhlale ngokungathi ibucala ngokupheleleyo.
Akusayi kubakho nxibelelwano nabanye endlwini ngelixa uhlala.
Esi sisimbo sasentshona esingeniswa kumazwe angaphandle, indlu ephangaleleyo ngaphezulu kokujonga intsimi yerayisi kunye nololiwe wasekhaya. Ukufikelela kwivenkile enkulu, i-COSTCO, iMarike yeentlanzi kwimizuzu eyi-10 ngemoto.
Ukufikelela ngokulula kwiHitachi Seaside Park, Oarai Beach kunye neNakaminato Port. Inkonzo yothutho iyafumaneka kwiziko leendwendwe.
Kumgangatho woku-1 kukho igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Kukho isifudumezisi sokupheka, ifriji, iiMicrowave, iOveni kunye neentlobo ngeentlobo zezitya kunye nempahla yokupheka ekhitshini.
Iindwendwe ezi-2 kumgangatho we-2. Enye ineebhedi ezinobukhulu obuphindwe kabini kunye nesayizi enye yeendwendwe ezi-3, enye ineebhedi ezi-4 zeebhedi kunye nee-singles ezi-2 zeendwendwe ezili-10, iindwendwe eziyi-13 zizonke.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-4
4.91 ·Izimvo eziyi-179
4.91 out of 5 stars from 179 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-179
Ulibale ingxolo edolophini kwaye uchithe ixesha elimnandi kakhulu. Ibekwe kanye ecaleni kwamasimi erayisi, kumnandi kakhulu ukuhambahamba ebaleni. Uya kubona oololiwe baseLwandle lwaseHitachinaka ukusuka efestileni ngamaxesha athile.
Ukuba uqhuba imoto, ukufikelela kwivenkile enkulu, iiresityu kunye neevenkile ezithengisa kulula. Ungakwazi ukufikelela kwimarike yeentlanzi yaseCostco Hitachinaka kunye neNakaminato ngemizuzu eyi-10 ukuya kweli-15.
Umbuki zindwendwe ngu- Yoshi
Ndiyavuya ukunxibelelana, ukukunceda nangaliphi na ixesha.
Inombolo yomthetho: M080000246